Most Popular | Makalukhabar.com
माघ २१, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी शिखर सुज विन्टर सेल मेला पर्सी अर्थात २३ गते सकिँदैछ । पुस २० गतेबाट सुरु भएको शिखर सुज विन्टर सेल मेलामा लाखौं उपभोक्ताले आफुलाई मनपर्ने जुत्ता चप्पल भारी छुटमा खरिद गरिरहेका छन् । मेला सकिन २ दिन बाँकी रहँदा उपभोक्ताको भिड थामिनसक्नु भएको छ । जोरपाटी नयाँबस्तीकी सृजना खतिवडाले शिखर मेलामा राखिएका जुत्ताचप्पलहरु सस्तो र राम्रो रहे...
‘हरामीके बच्चा सक्ने भए लड्न आइज....यस्तो गाली गर्न सुहाउँछ सचिव ज्यू ! (भिडियो सहित)
पुस २९, काठमाडौं । २ नं. प्रदेशका मन्त्री विजय यादवले सचिव विद्यानाथ झालाई सभामुखकै अगाडी कुटपीट गरेपछि सचिव झाले आमचकारी गाली गर्दै मन्त्रीलाई एक्लै एक्लै लड्न आउन चुनौति दिएका छन् । कार्यकक्ष बाहिर सुरक्षाकर्मी र प्रदेशस...
नेपाल आइडलका सुमितले जब अस्मितालाई यसो भने !
मंसिर २३, झापा । नेपाल आइडल सिजन २ यतिबेला ग्राण्ड फेनालेको संघार तिर छ । शुक्रबारको एपिसोडबाट नवलपरासीका अमित बराल बाहिरिए पछि चार प्रतिष्पिर्धी विच उपाधीका लागि होड चलिरहेको छ । यसमा झापाका दुई प्रतिष्पर्धीको प्रतिष्पर्धा भने बडो रोचक देखिएको छ । झापाका सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी एउटै जिल्लाका भएपनि दर्शक समेत बाँडिएका छन् । झापामा यतिबेला अस्मिता र सुमितका फ्यानहरु...
पब्लिक स्पीकर नेपाल २ को उपाधि धरानका रमेश प्रसाईलाई
माघ ११, काठमाडौं । पब्लिक स्पीकर नेपाल २ को उपाधि धरानका रमेश प्रसाईले हात पारेका छन् । फाइनल चरणमा ५ जना प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै रमेशले उपाधि हात पारेका हुन् । देशका १२ स्थानमा भएको अडिसनमा सहभागी ११ सय प्रतिष्पर्धीबाट रमेशले उपाधि...
माघ १३, काठमाडौं । शिखर सुजले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन गरिरहेको जुत्ताचप्पलको विन्टर सेल मेला एक साताका लागि थपिएको छ । ग्राहकलाई...